YINTONI INKQUBO YE-USO CORE WORKER OKANYE I-USOCOREWORKER.EXE? - ITHAMBILE
Yintoni iNkqubo ye-USO Core Worker okanye i-usocoreworker.exe?
Uninzi lwabasebenzisi beWindows 10, besebenzisa u-1903 nangaphezulu, beza nemibuzo malunga nezinye usocoreworker.exe okanye inkqubo engundoqo yomsebenzi ye-USO . Abasebenzisi bafumanise ngale nkqubo ngelixa behlola ifayile ye- Umlawuli womsebenzi iwindow. Kuba yayiyinto entsha kwaye ingaviwa, ishiye abasebenzisi benemibuzo emininzi. Abanye babecinga njenge-malware okanye intsholongwane, ngelixa abambalwa bagqiba kwelokuba yinkqubo entsha. Nokuba yeyiphi indlela, kungcono ufumane ithiyori yakho iqinisekiswe ngokupheleleyo okanye iyaliwe.
Inkqubo yoSetyenziso loMsebenzi we-USO (usocoreworker.exe) kwi Windows 10 Inguqulelo 1903
Uyifumana njani inkqubo ye-USO Windows 10
Inyani yokuba ulapha, ufunda eli nqaku, ibonisa ukuba nawe ucinga ngeli xesha litsha leNkqubo ye-USO Core Worker. Ke yintoni le nkqubo ye-USO Core Worker? Iyichaphazela njani inkqubo yekhompyuter yakho? Kule nqaku, siza kuphazamisa ezinye iimbali malunga nale nkqubo. Masiqhubeke ngoku nento eyiyo usocoreworker.exe:
Okokuqala, kufuneka uyazi ifom epheleleyo ye-USO. Imele Ukuhlaziya iSeshoni yeOrchestrator. I-usocoreworker.exe sisixhobo sokuHlaziya esitsha esaziswa yiWindows esebenza njengomnxibelelanisi ukulawula iiseshoni zohlaziyo. Kuya kufuneka uyazi ukuba .exe lulwandiso lweefayile ezisebenzayo. Inkqubo yokuSebenza yeWindows yeWindows iphethe inkqubo ye-USO. Yinkqubo esisiseko yokutshintsha iarhente endala yoHlaziyo lweWindows.
Inkqubo ye-USO isebenza ngezigaba, okanye mandithi izigaba:
Isigaba sokuqala yi Isigaba sokuskena , apho ijonga khona uhlaziyo olukhoyo nolufunekayo.
Isigaba sesibini ngu Khuphela isigaba . Inkqubo ye-USO kwesi sigaba ikhuphela uhlaziyo olwaqala ukuvela emva kokuskena.
Isigaba sesithathu ngu Faka isigaba . Uhlaziyo olukhutshelweyo lufakiwe kweli nqanaba lenkqubo ye-USO.
Isigaba sesine nesokugqibela kukuba Zibophelele . Kule nqanaba, inkqubo yenza lonke utshintsho olubangelwa kukufaka uhlaziyo.
Phambi kokuba kungeniswe le USO, iiWindows zifundise i-wuauclt.exe, kunye ne qaphela ngoku Umyalelo owawusetyenziselwa ukucwangcisa uhlaziyo kwiinguqulelo ezindala. Kodwa nge Windows 10 1903 , lo myalelo ulahliwe. Useto lwesiko lususwe kwiphaneli yokulawula ukuya kwiiNkqubo zeNkqubo kolu hlaziyo. I-usoclient.exe ithathe indawo ye-wuauclt.exe. Ukusuka nasemva kowe-1903, i-wuauclt isusiwe, kwaye awusenako ukusebenzisa lo myalelo. IWindows ngoku zisebenzisa ezinye izixhobo ukuskena uhlaziyo kwaye uzifake, njenge-usoclient.exe, usocoreworker.exe, usopi.dll, usocoreps.dll, kunye ne-usosvc.dll. Ezi nkqubo azisetyenziselwa kuphela ukuskena kunye nokufaka kodwa naxa iWindows sele iza kongeza amanqaku amatsha.
UMicrosoft ukhuphe ezi zixhobo ngaphandle kwemiyalelo kunye noxwebhu. Ezi zakhululwa ngenqaku nje elalisithi - ‘ Le miyalelo ayisebenzi ngaphandle kweNkqubo yokuSebenza yeWindows . ’Oku kuthetha ukuba akukho mntu unokufikelela ekusetyenzisweni komthengi okanye kwiNkqubo ye-USO Core Worker ngaphandle kwenkqubo yokusebenza ngokuthe ngqo.
Kodwa akukho ntsingiselo yokungena nzulu kwesi sihloko. Ngamafutshane, sinokuyiqonda indlela Inkqubo ye-USO Core Worker Process (usocoreworker.exe) njengenkqubo yenkqubo yeWindows, enxulumene nolawulo kunye nokujonga uhlaziyo lokuhlaziya kunye nokufakelwa kweWindows. Le nkqubo iyasebenza xa kufakwa amanqaku amatsha kwiNkqubo yokuSebenza. Ayisebenzisi nayiphi na imemori yenkqubo yakho kwaye ayikukhathazi nangasiphi na isaziso okanye pop-up. Rhoqo ibangela nawuphi na umcimbi. Ke, unokukwazi ngokulula ukungahoyi kwaye uvumele le nkqubo ukuba iwenze ngaphandle kokukukhathaza.
Funda kwakhona: Ungakukhubaza njani ukuvela kwe-Usoclient.exe
1. Okokuqala, kufuneka uvule uMphathi woMsebenzi ( Ctrl + Shift + Esc ).
2. Khangela Inkqubo yabasebenzi baseMelika . Ungajonga indawo ekuyo kwikhompyuter yakho.
3. Cofa ekunene kwi Inkqubo yabasebenzi baseMelika kwaye ukhethe Iipropati . Unokuklikha kwakhona Vula Indawo yeFayile . Oku kuya kuvula ifolda ngokuthe ngqo.
Unokujonga i-USO kuMcwangcisi weSebenzi.
1. Cinezela isitshixo seWindows + R emva koko chwetheza imisebenzix.msc kwaye ucofe u-Enter.
dns ayiphenduli windows 10 lungisa
2. Jonga kule folda ilandelayo:
IsiCwangcisi soMsebenzi weThala leencwadi> Microsoft> Windows> UhlaziyoOrchestrator
3. Uya kuyifumana inkqubo ye-USO phantsi kweFoldaOrchestrator yolawulo.
4. Oku kuchaza ukuba i-USO isemthethweni kwaye isetyenziswa yinkqubo yokusebenza yeWindows uqobo.
Ke, iintsomi zokuba yi-malware okanye intsholongwane yenkqubo ikhutshiwe. Inkqubo engundoqo yomsebenzi ye-USO yinto ebalulekileyo yeWindows kwaye isetyenziswa yinkqubo yokusebenza ngokwayo, nangona inkqubo eqhubayo ingaze ibonakale.
Kodwa masikunike ilizwi lokulumka: Ukuba ufumana inkqubo ye-USO okanye nayiphi na ifayile ye-USO.exe ngaphandle kwedilesi C: WindowsSystem32, kungangcono ukuba uyayisusa loo fayile okanye inkqubo. Ezinye i-malware zizenza njengenkqubo ye-USO. Ke ngoko kuyacetyiswa ukuba ujonge indawo yeefayile ze-USO kwinkqubo yakho. Ukuba ufumana nayiphi na ifayile ye-USO ngaphandle kwefolda enikiweyo, yisuse kwangoko.
Kuyacetyiswa: Zeziphi ezinye zeeleta eziGqwesileyo eziKhethiweyo kwiMicrosoft Word?
Nangona inkqubo ye-USO isebenza kwaye isebenza ngaphandle kongenelelo lomntu, iiWindows zinika abasebenzisi amandla okujonga uhlaziyo kunye nokuzifaka ngokusebenzisa iarhente yeUSO. Ungasebenzisa imiyalelo kwilayini yomyalelo ukukhangela uhlaziyo kunye nokuzifaka. Eminye yemiyalelo idweliswe apha ngezantsi:
C:WindowsSystem32UsoClient.exe  RefreshSettings  C:WindowsSystem32UsoClient.exe  RestartDevice  C:WindowsSystem32UsoClient.exe  ResumeUpdate  C:WindowsSystem32UsoClient.exe  StartDownload  C:WindowsSystem32UsoClient.exe  StartScan  C:WindowsSystem32UsoClient.exe  StartInstall  C:WindowsSystem32UsoClient.exe  ScanInstallWait
Ngoku ukuba udlule kwinqaku kwaye waqonda iinkqubo ze-USO, sinethemba lokuba ukhululekile kuwo onke amathandabuzo akho malunga nezixhobo ze-USO. Ukuba uziva unamathandabuzo okanye imibuzo, masazise kwibhokisi yezimvo.
i-itunes ayinakuqhagamshela kwimpazamo ye-iphone 0xe80000a
windows 10 inguqulelo 1809 ayiphumelelanga ukufaka
Kutheni le nto iiwindows ziqhubeka nokuhlaziya
Ungayicoca njani i-facebook messenger
Imakrofoni iyekile ukusebenza emva windows 10 uhlaziyo
ucaphula njani umntu kwiyantlukwano